नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): यसरी नेपालमा पहिलो पटक सवारी साधन भित्रिएको थियो !
यसरी नेपालमा पहिलो पटक सवारी साधन भित्रिएको थियो !
यसरी नेपालमा पहिलो पटक सवारी साधन भित्रिएको थियो भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । भिमफेदीबाट बोकेर काठमाण्डौ सम्म ल्याएको पहिलो गाडी यो नै हो । काठमाण्डौबासीले पहिलो पटक जुद्धसडक देखि सिहदरवार सम्म राणा श्री ३ चढेको गाडी यो नै देखेका हुन । अहिले भने काठमाण्डौमा लाखौ सवारी भित्रीएका छन । जसले काठमाण्डौलाई अस्तब्यस्त भिडभाडको शहर पनि बनाएको छ । - Upendra Karki